Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IATA: Imithwalo yomoya yomhlaba wonke ifuna ukukhula kwendawo
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Xa uhambo lwamazwe aphesheya lusadandathekile kakhulu, zimbalwa iinqwelomoya zabakhweli ezibonelela ngesisu somthwalo. Kwaye ii-bottlenecks zonikezelo zinokuqina njengoko amashishini eqhubeka nokonyusa imveliso.
Imfuno zehlabathi, ezilinganiswe kwimithwalo yeetoni zekhilomitha (i-CTKs), inyuke nge-7.7% xa kuthelekiswa no-Agasti 2019 (8.6% yemisebenzi yamanye amazwe).
Isantya sokukhula sinciphise kancinci xa kuthelekiswa noJulayi, ethe yabona ukonyuka kwemfuno nge-8.8% (xa kuthelekiswa namanqanaba e-pre-COVID-19).
Ukufunyanwa kwakhona komthwalo wempahla kumiswe ngo-Agasti, wehla nge-12.2% xa kuthelekiswa no-Agasti 2019 (13.2% kwimisebenzi yamanye amazwe). Kwinyanga-zenyanga, umthamo wehle nge-1.6% -owona wehlayo mkhulu ukusukela ngoJanuwari 2021.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) ikhuphe idatha ka-Agasti ka-2021 yeemarike zempahla yomhlaba jikelele ebonisa ukuba ibango liyaqhubeka nokukhula ngamandla kodwa uxinzelelo kumandla luyenyuka.
Njengoko uthelekiso phakathi kwe-2021 kunye ne-2020 yeziphumo zenyanga zigqwetha impembelelo engaqhelekanga ye-COVID-19, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, lonke uthelekiso olungezantsi luye ku-Agasti 2019 olwalulandela umzekelo oqhelekileyo wemfuno.
Imfuno zehlabathi, ezilinganiswe kwimithwalo yeetoni zekhilomitha (i-CTKs), inyuke nge-7.7% xa kuthelekiswa no-Agasti 2019 (8.6% yemisebenzi yamanye amazwe). Ukukhula ngokubanzi kuhlala komelele xa kuthelekiswa nexesha elide lokukhula elijikeleze i-4.7%.
Iimeko zoqoqosho ziyaqhubeka nokuxhasa ukukhula kwemithwalo yomoya kodwa zibuthathaka kancinci kunezo zeenyanga ezidlulileyo ezibonisa ukuba ukukhula kwemveliso kwihlabathi kuye kwenyuka:
Icandelo lokuphuma kwemveliso ka-Agasti yeeNdawo zaBaphathi beZinto zokuThenga (ii-PMI) yayiyi-51.9, ebonisa ukonyuka kwexesha elifutshane lokufuna ukuba iiodolo zithunyelwa ngenqwelomoya. Oku kuyehla ukusuka kuma-54.4 ngoJulayi.
Icandelo elitsha lika-Agasti lokuthumela izinto kwelinye ilizwe le-PMIs lalilungele imithwalo yomoya, nangona yayixhasa kancinci kuneenyanga ezidlulileyo. Ukwanda kuqhubekile kwinqanaba lehlabathi, nangona kunjalo, bekukho ukurhoxa kuqoqosho olusakhulayo.
Umyinge wempahla kunye nentengiso uhlala uphantsi ngaphambi kwexesha lokuphela konyaka lokuthengisa. Oku kulungile kwimithwalo yomoya, nangona kunjalo ezinye izithintelo zomthamo zibeka oku emngciphekweni.
“Imfuno yemithwalo yomoya ibinenye inyanga eyomeleleyo ngo-Agasti, inyuke nge-7.7% xa kuthelekiswa namanqanaba e-pre-COVID. Uninzi lwezalathi zezoqoqosho zikhomba kwixesha elinamandla lokuphela konyaka. Xa uhambo lwamazwe ngamazwe lusadandathekile kakhulu, zimbalwa iinqwelomoya zabakhweli ezibonelela ngesisu semithwalo. Kwaye neebhotile zokuthintela ukuthengwa kwempahla zinokuqina njengoko amashishini eqhubeka nokunyusa imveliso, ”utshilo UWillie Walsh, IATAUMlawuli-Jikelele.
IATA: Imithwalo yomoya yomhlaba wonke ifuna ukukhula kwezithuba | Iindaba zebhlog uthi:
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-20: 20
[…] IATA: umthwalo womoya wehlabathi jikelele ufuna ukukhula kwezithuba zomsebenzi […]